19 amin’ireo dia aty Afrika avokoa. Noraketina anaty tahirin-kevitra 45 pejy nampitondraina ny lohateny hoe “L'aide financière accaparée par les élites” fa manodinkodina ny fanampiana avy amin’ny mpamatsy vola ny mpitondra amin’ireo firenena 22 ireo. Raha ny fanadihadiana voarakitra dia manodidina ny 5%n’ireo fanampiana dia arotsak’ireo mpitondra any amin’ny tombontsoany na “Paradis fiscaux” azy manokana. Raha heverina hanampy 1% ny harin-karena faobe na PIB ho an’ny firenena iray ny fanampiana iray tonga dia tsikaritra ho mitombo 3,4% kosa ilay Lanitra hetra na Paradisa fiskaly voalaza teo ho an’ireo firenena mampiasa azy araka ny tokony ho izy. Ho an’ireo firenena izay tsy isan’izany kosa dia tsy ahitana io fandrotsahana io fa any amina banky manokan’ireo mpitondra manodina azy no hirotsahan’izany, raha ny tatitra hatrany. Misimisy ihany izay tahana Lanitra hetra mirotsaka amin’ireo firenena mila fanampiana izay. Isan’ny voatanisa ny an’i Madagasikara izay mitentina 193 tapitrisa dolara, Tanzania 145 tapitrisa ary 103 tapitrisa ho an’i Burundi. Efa nomelohin’ny banky iraisam-pirenena moa izay fanodinana fanampiana aty amin’ny firenena an-dalam-pandrosoana izay, raha tsiahivina hatrany ny tatitra ary antony mampametra-panontaniana io manoloana ny tsy fangaraharahan’ny fitantanana ny fanampiana momba ny fahamehana ara-pahasalamana ankehitriny.